China: Nnukwu nkwalite netwọkụ njem ọhụrụ site na 2025
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » China » China: Nnukwu nkwalite netwọkụ njem ọhụrụ site na 2025
China ga-enwe okporo ụzọ ụgbọ oloko 165,000 na 2025, site na 146,000 kilomita afọ ise gara aga; karịa ọdụ ụgbọ elu obodo 270, site na 241; 10,000 kilomita nke ahịrị ụgbọ oloko n'obodo ukwu, site na kilomita 6,600; Ụzọ okporo ụzọ 190,000, site na 161,000 kilomita; na 18,500 kilomita nke ụzọ mmiri dị n'ime ala dị elu, sitere na kilomita 16,100.
Kansụl steeti China wepụtara akwụkwọ na-akọwapụta ebumnuche ndị bụ isi maka mmepe netwọkụ njem nke obodo na oge atụmatụ afọ ise nke iri na anọ site na 14 ruo 2021.
Ụzọ ụgbọ oloko na-agba ọsọ ga-agbatị na ngụkọta nke kilomita 50,000 na 2025, site na 38,000 kilomita na 2020, na kilomita 250 na-atụ anya na ọ ga-ekpuchi pasent 95 nke obodo ndị nwere ihe karịrị 500,000.
Usoro njem ga-adịkwa ndụ ndụ. Obodo ga-ahụ 72 pasent nke ụgbọ ala na-agba ọsọ na ume ọhụrụ, mmụba sitere na 66.2 pasent, na ike ikuku carbon dioxide nke ngalaba njem ga-eji pasent 5 belata.
Ebumnuche bụ isi bụ iji nweta mmepe agbakwunyere na 2025, yana nsonaazụ a na-ahụ anya na mgbanwe ọgụgụ isi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke usoro njem, dịka atụmatụ siri dị.
Na-ele anya na 2035, atụmatụ a chọrọ iji wuo "1-2-3 okirikiri" maka njem ndị njem na njem nke ngwaahịa.
Nke ahụ pụtara oge njem n'ime obodo na ụyọkọ obodo, na n'etiti obodo ukwu ga-ebipụ otu awa, awa abụọ na awa atọ, n'otu n'otu. Ọ ga-ekwe omume izipu ozi sitere na ọrụ awara awara n'ime obere oge dịka otu ụbọchị n'ime China, ụbọchị abụọ mgbe ezigara mba ndị gbara agbata obi, na ụbọchị atọ mgbe ezigara ndị isi obodo zuru ụwa ọnụ.
N'afọ 2025, nchekwa ọka, ike na mmanụ na nnukwu ọwa ga-enwe nkwa siri ike karị, a ga-echekwa ụdọ ọkọnọ ngwa ngwa mba ụwa nke ọma, dịka atụmatụ ahụ siri dị.
A ga-emeziwanye njikọta mba ụwa, atụmatụ ahụ kwuru, na-akọwapụta mbọ iji kwalite akụrụngwa njem na mba ndị agbata obi, na-akwado maka mmepe mmepe dị elu. China-Europe okporo ụzọ ụgbọ oloko ibu, ma wuo “ụzọ ikuku silk,” n'etiti ndị ọzọ.
Ntughari njem: World Tourism Network na-ahụ oge ugbu a
Ọdịnihu ọhụrụ nke nhazi ụgbọ elu United Airlines
Iwu nkpuchi maka ụgbọ elu gbatịkwuru oge nke atọ
Comoros Islands bụ ebe njem nlegharị anya ọhụrụ zuru oke na ...
Skal New Orleans na-ebuli $5,000 maka ndị gbara ọsọ ndụ Ukraine
Kia Niro ọhụrụ 2023 na-eme mpụta izizi ya na-adigide
Vanuatu Tourism ahụmahụ ọhụrụ nke ndụ ga-amalite...
A kwadoro ọgwụgwọ ọrịa cancer cervical metastatic ugbu a
Air Lease Corporation nyere iwu ụgbọ elu Boeing 32 MAX 737 ọhụrụ
Njem nlegharị anya Jamaica na-abawanye mgbe COVID-19 gasịrị
Ebuli Butt ọhụrụ n'ụdị Liquid
UK wepụrụ mmachi niile fọdụrụ na mba ụwa…
Ọdụ ụgbọ elu 5 US dị n'ọkwa 10 kacha elu n'ụwa
Breeze Airways ghọrọ onye otu NACA ọhụrụ
Ngwa ahụike anaghị akwụ ụgwọ maka nchekasị na ehighi ura
Canada Jetlines na-ekwupụta ọbịbịa ụgbọ elu mbụ na…
Ụgbọ elu ọhụrụ anaghị akwụsị akwụsị si Washington, DC gaa Cape Town
Ngalaba Steeti: Ndị America niile nọ na Russia na Ukraine…
HRH Prince Mohammed bin Salman: TROJENA bụ ụwa ọhụrụ…
Nde ụmụaka 10 na-eche oké ọkọchị ihu na Africa
Estonia kwụsịrị inye ụmụ amaala Russia visa ...
De Havilland Aircraft of Canada Limited weputara DHHC…
Russia kwụsịtụrụ na UN Human Rights Council